Barnaamijka waxbarashadu wuxuu horumariyaa isbadal, nidaamyo waara oo isbadal lagu sameeyo waxbarashada iyadoo la dhisayo dariiqyo kala duwan, aqoonyahanno wax ku ool ah iyo qoysaska ku lug leh. Wadajir ahaan, istaraatiijiyadani waxay abuurayaan shuruudaha nidaamka iskuulka ee u suurageliya guusha ardayga. Kuwani waa habab ku salaysan hannaan oo aqoonsan qiimaha weyn ee ardayda luqadaha kala duwan ee luqadaha kala ah, dhaqan ahaan, iyo jinsiyadaha kala duwan, qoysaska, iyo barayaasha.
Kala duwanaanta, Barayaasha wax ku oolka ah
Qoysasku waxay qabteen
Soo jiid, u diyaarso, oo ku hayso Kala duwan, Barayaasha waxtarka leh
Waxaan maalgelineynaa dhismaha wadooyinka barayaasha kuwaas oo awood u siinaya shakhsiyaadka kala duwan ee aqoonta sare leh inay awood u siiyaan inay ka soo qaataan dugsiyada ku yaala gobolka oo dhan. Tani waxaa ka mid ah dadaallada taageerada ee hormarinta xirfada iyada oo la abuurayo shuruudo siyaasadeed oo wanaagsan oo soo jiidata musharraxiinta kala duwan ee waxbarashada. Intaa waxa dheer, waxaanu diirada saarnaa bixinta diyaarinta barashada tayada leh, dhaqan ahaanba ku habboon oo ay ku jiraan waayo-aragnimo qani ah oo khibrad leh. Waayo-aragnimadani waa inay bixiyaan macalimiin iyo macallimiin dugsi oo leh fursado ay ku bartaan oo ay helaan jawaab celin macno leh. Marka ay shaqaalahani bilaabaan oo ay hogaamiyaan, waxaan higsaneynaa inaan taageerno dugsiyada iyo degmooyinka qorista iyo ilaalinta tayada ugu fiican.
Marka aynu ka shaqeyno abuurida kooxo kala duwan oo ah barayaasha wax ku oolka ah, shuruudaha deeq-lacageedkeena waxay xoojinayaan dadaalada qabta kuwan soo socda:
sare u qaadaan xirfadda waxbarasho iyada oo soo jiidata musharaxyo kala duwan oo beesha ah isla markaana hubinaya in dawlad-goboleedyada iyo degmooyinka ay kordhiyaan tayada aqoonta iyo kor u qaadista kala-jaadnimada, sinnaanta, iyo ka-qaybgalka
dhisaan waddooyinka diyaarinta barbaarinta hababka soo socda:
horey u marin habab tayo sare leh oo loogu talagalay diyaarinta barayaasha munaasabadaha kala duwan
taageeraan wadaagista macluumaadka iyo isticmaalka adeeg bixiyeyaasha iyo iskuullada lammaanaha iyo degmooyinka
kobcinta awoodda dugsiga iyo degmo dugsiyeed si ay si wax ku ool ah u qoraan oo u haystaan barayaasha ku jira dugsiyada tayo sare leh, dhaqan ahaan wax ka qabta
Ka qayb qaadashada Qoysaska adigoo u-doodaya isbeddelka
Waxaan sidoo kale ku maalgelineynaa xeeladaha la gali qoysaska iyo beelaha sida ugu kalsoonida badan ee nidaamka waxbarashada isbedelka. Waxaan taageereynaa fursadaha qoysaska si ay u yeeshaan cod micna leh ee go'aannada saameeya carruurtooda dugsiga, degmada, iyo heerarka gobolka. Tani waxaannu samaynaa annagoo kaashanayna ururrada bulshada ku salaysan oo bixiya macluumaad tayo sare leh oo dhaqan ahaan u khuseeya qoysaska iyo kobcinta awooda qoysaska si ay u qabtaan macluumaadkaas iyaga oo siyaabo badan u muujinaya xuduudahooda iyo baahidooda carruurtooda.
Marka aan taageerno qoysaska la ogeysiiyay oo ku hawlan sidii ay ugu doodi lahaayeen xaaladaha nidaamka iskuulka ee u suurtogeliya guusha ardayga, shuruudaha deeq-lacageedkeena waxay xoojinayaan dadaallada qabyada soo socda:
wanaajinta qoysaska iyo bulshada si ay u helaan macluumaad tayo sare leh oo dhaqan ahaan khuseeya oo ku saabsan dugsiyada iyo nidaamka dugsiyada
kor u qaadida awooda qoyska iyo kartida bulshada si ay ugu doodaan siyaasadaha iyo waxqabadka wanaagsan ee iskuulka, degmada iyo heerarka gobolka
Marka la fulinayo istiraatiijiyadayada, waxaanu xoogga saari doonaa waxyaabaha soo socda:
in ilmo kasta uu u qalmo helitaanka dugsi tayo sare leh, dhaqan ahaan wax ka qabta oo ka shaqeeya barayaal kala duwan, wax ku ool ah
naqshadeynta, oo ay ku jiraan abuuritaanka jawi siyaasadeed oo dabacsan oo leh caqabado hooseeya si ay ugu soo galaan xalal fara badan
dadaalada ujeeda jawi beeleed oo ku habboon khibrada iyo caddaynta
fursadaha qoysaska iyo beelaha si waxtar leh u saameeya nidaamka waxbarashada
dhalinta, isu-keenidda, iyo xiriirinta xogta waxtarka barayaasha, waxqabadka ardayga, tayada dugsiga, iyo fursadaha fursadaha, iyada oo xoogga la saarayo macluumaadka ku habboon oo loo hawlgalo qoysaska iyo dugsiyada
fursado dheeraad ah oo loogu talagalay barashada wadaagga ah iyo iskaashiga ka dhaxeeya lamaanahayaga
Kalluumeysiga McKnight ee saamayntii la isku halleyn karo ee lagu dhisayo isbahaysiga meelaha laga soo saaro
isticmaalka jilicsan ee qalabka "McKnight", oo ay ku jiraan maalgelinta, iskaashiga, dib-u-habeynta siyaasadda, cilmi-baarista iyo isgaarsiinta
Marka lagu daro istiraatiijiyadaha kor ku xusan, barnaamijka waxbarashada ee waxbarashada Dhallinta, oo ah urur dhexdhexaadin ah waxay maalgelinaysaa mustaqbalka Minnesota iyagoo maalgelinaya dhalinyarada. Ayadoo loo hoggaansamey balanqaadka sinaanta sinjiyada, Youthprise waxay u shaqeysaa in ay wax ka beddesho sida maalgaliyayaasha, hay'adaha, bixiyeyaasha, iyo jaaliyadu la shaqeeyaan dhalinyarada.
Maalgelinta hore ee Qorista Bilowga
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan shaqada hore ee McKnight ee ku saabsan akhris-qorista hore, Barnaamijka Pathway Schools Initiative, booqo www.supportminned.org casharadii laga bartay. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay arrimahan liiska warbixinnada iyo kheyraadka la xiriira barnaamijka.
Barnaamijkayaga Waxbarashada ayaa taariikh ahaan diiradda saaray Minneapolis-St. Booska Booska Booska, waxaanu sii wadaynaa inaanu si wayn u dhexgalno. Hadafkayaga shaqooyinka mustaqbalka waxay u fidsan yihiin gobolka oo idil, waxaanan soo dhaweynaynaa maalgalinta maalgalinta laga bilaabo Greater Minnesota.
Labada istiraatiijiyadeed, sida kor lagu sharraxay oo lagu muujiyey jaantuska halkan, ayaa looga golleeyahay in lagu baddalo isbeddelka dugsiyada ka yimaada iyada oo kor u qaadaysa baaxadda barayaasha kala duwan, barayaasha wax ku oolka ah iyo dibedda iyagoo ku dhiirigelinaya awoodda qoysaska iyo bulshooyinka awoodda u leh inay saameyn ku yeeshaan waxbarashada carruurtu helaan. Wadajir u shaqeynta, ciidamadan waa in ay abuuraan xaalado nidaam dugsi oo u suurtageliya guusha ardayda iyo in la hubiyo in ardayda Minnesota ay ku guuleystaan bulsho sii kordheysa oo adduunka ah.
Qorshayaasha Dugsiyada Pathway